“DHALOOTI GUMAA ” HUNDEE GADI DHAABEERA !!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“DHALOOTI GUMAA ” HUNDEE GADI DHAABEERA !!!
Har’aa Gootummaan Biyya keessatti argaa fi dhaga’aa jirru, akka sabaatti itti boonna. Gammachuun nu mirqaansaa jira. Dhiigni wareegamtootaa bilaashatti akka hin hafnee nu abdachiisa. Qabsaa’oonni Umurii isaanii guutuu saba kanaaf of kennan keessi isaanii boqonnaa argachuun haqa. Dadhabbiin isaanii sadarkaa kanarra ga’uutti ni gammadu. Dhalooti qabsoo kana dhaalaa jirus, rakkoo hedduu keessa dabranii har’arra ga’utti hamilee guddaa keessa jiru. Gumaa ka nu baasuu kumaa kitilaan horachuu keenyatti , abdiin guutameerra. Qabsoo akka nama tokkotti gaggeeffamaa jiru kanarra ga’uuf, wareegama waa hundaa itti baafneerra. Akka sabaatti, Har’arra dhaabbannee hegaree keenya wayita tilmaamnuu, hegareen keenya shakkii tokko malee harka keenya jiraachuu ifatti mirkaneeffanna. Waan barbaannee yeroo barbaanneetti raawwachuu akka dandeenyu dhugeeffanna. Kana tikifannee isa caalutti tarkaanfachuun ammoo murtee keenyadha.
Qabsoon gaggeeffachaa jirru sadarkaa irra ga’ee beekuuf, xiinxalaa ykn beektoota barbaachaa hin dhaqinuu. Yeroon isaa dabreera. Dhala Oromoo hundatu deebii itti kennuu danda’aa. kana ibsuuf karaa walitti hin dhiphifnuu. Nuuti Gootoonni waan hojjatan qofa dubbachuuf wayita sardamnutti Ijoolleen Qubee Lubbuu nu wareeguuf wal danquu qalbifachuu nu feesisa. Dhaloota gonkumaa Imaanaa abbootii isaa hin sharfnee ijaaree jiraachuu ijaan argaa jirra. Qabsoon har’aa sadarkaa sabaatti gaggeeffamaa jiru, addatti bara 2000 irraa kaasee haalaan jabaachaa dhufee, dhaloota hin boorofnee dhalchee jira. yoo xiqqaatee labsii yeroo gabaabaadhaan, ykn waamicha yeroo gabaabaadhaan kaayyoo tokkof hiriirsuu fi Hogganamuu irra geenyee jirra. Kanarra ga’uuf adeemsa dheeraa deemamee jira. Ilmaan Oromoo qaqqaalii itti dhabneerra. Qabeenyaa fi beekumsa akkasumas, humna dhala Oromoo itti dhabneerra. Kanaaf kabajaa qabnaa. Kanaaf waan bubuutuu irra , waan gurguddaa faarsuu jaalanna.
Wareegama Biyya keessaa kafalamaa jiru irratti dantaa ofii gaggeeffachuuf yaaluun salphina ofii argisiisa. Waan hin beekneetti ykn waan ta’uuf jiru osoo hin hubannee, waa butachuuf jedhamee adeemsi taasifamu waa hedduu akka nu dhabsiisuu beekuu barbaachisa. gam hundaan , adeemsa walii galaa irratti hirkifannee deemuu akka qabnuu beekuun qabnaa. Wayyaaneen waan gaggeeffamaa jiru kana hidda isaa argachuuf haalaan ifaajjaa jirti. Goknumaa bira hin geessu. Garuu sochiilee kana waan gufachiisuu danda’aan irraa of qusachuun , waan gaggeeffamu kun akka milkaa’uuf gumaachuu ta’uu haa hubannu. Dhaloota Gumaaf muratee kana milkeessuuf malee gufachiisuuf kan socha’uu diinuma . Dhaloota Gumaa kana kunuunsuun haalaan barbaachisaadhaa. Qabsaa’oota halkanii fi guyyaa ifaajjanii waan kana asi baasaniif gama hundaan gargaarsa gochuun murteessaadhaa.
Marsaa 3ffaan kun yeroosaatti 4ffaa dhalchuun waan hin oollee. Guyyuu garaa jabaachaa deemna. Murannoon keenya dabalaa deema. Gootummaan keenyas akkasuma. Beela’uu fi dheebochuun, rakkachuu fi miidhamuun qaama nu ta’uu qabdii. Gonkumaa karaa eegallee irraa hin deebinuu. Saba keenya guutummaatti qabsoo kana keessatti hirmaachisanii, Qabsoo Ummata Oromootti dhageetti horuun ammallee itti fufa. Hundumtuu qe’ee isaa qulqulleeffachuun isa xumuraa ta’uu malaa of onneechiisaa. Daangaarraa gara gidduu galeessaatti, ykn gudduu galeessarraa gara Daangaatti diina furgaasuun , hammeenyu diinaa irratti hundaa’aa qaamaa qalbii itti qophaa’aa.